प्रधानमन्त्रीको रुपमा मधेशी जनताको लागि जे मिहिनेत गरेँ, त्यसको फल अहिले लाग्दैछ : पुष्पकमल दाहाल
पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि मधेशमा सक्रिय छन् । कुनै बेला देशकै सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई अहिले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न निकै चुनौति देखिएको छ । सबै दलले प्रदेश नम्बर २ मा आफ्नो पार्टी पहिलो ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको अवस्था के छ त ? प्रदेश नम्बर २ को चुनावलाई लक्षित गरी ऋषि धमलाले दाहालसँग अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनको आयुदेखि शान्ती प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको छ । प्रस्तुत छ, दाहालसँगको अन्तरवार्ताको पूरा अंश ।
तपाई प्रदेश नम्बर २ मा हुनुहुन्छ । मधेशका जनताले के खोजेका रहेछन् ?
सबैभन्दा पहिलो म यहाँका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनतामा नयाँ जागरण पैदा भएको मैले देखेको छु । राजनीतिक र भौतिक जागरण जनतामा पाएँ । जनतामा मर्निङवाक गर्ने कल्चर भएको रहेछ । स्वास्थ्यप्रति सबै सचेत भएको देखेँ । स्वास्थ्यसँगै राजनीतिक चेतना पनि बढेको छ । २ नम्बर प्रदेशका सबै ठाउँमा लगातार घुमिरहेको छु । ठूलो उत्साह जनतामा पैदा भएको छ । नयाँ परिवर्तनका ल्याउने हिसाबले नयाँ नेतृत्वको खोजी मधेशका जनताले गरेका छन् । यस क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको पर्फरमेन्स राम्रो हुन्छ ।
परिवर्तनका पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने तपाईको भूमिका धेरै ठूलो छ । अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा जनताले कुन दललाई कसरी बुझेको पाउनुहुन्छ ?
गिरिजाबाबुसँग हस्ताक्षर गरेर नै अहिले देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ । गिरिजाबाबु जाँदाजाँदै हस्पिटलबाट के भन्नुभयो भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई थाहा छ । देश तपाईलाई जिम्मा लगाएर जाँदैछु भन्नुभएकै हो । त्यो जिम्मेवारी मैले महसुश गरेकै छु । मधेशको सवालमा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै काम गरेको छु । मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि घाइतेको उपचारदेखि सहिद घोषणासम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखेँ । संविधान संशोधनद्धारा मधेशी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा मैले धेरै मिहिनेत गरेँ । अहिले यो क्षेत्रमा म आउँदा के महसुस गरेँ भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा जे मिहिनेत गरेँ, त्यसको फल अहिले लाग्दैछ । मधेशी जनतामा एउटा लहर आएको छ । मधेशी जनताको पहिचान, अधिकार र यहाँको विकास गर्न सक्ने पार्टी माओवादी नै हो । मधेशमा जागरण ल्याउने पार्टी माओवादी नै हो । माओवादीको नेतृत्वमा मधेशीका १३ सय छोराछोरीको ज्यान गएको छ । त्यसैले नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनुमा मधेशी जनताको ठूलो भूमिका छ । हिजो राजको पछि लाग्नेहरुले गणतन्त्र ल्याएको त हुँदै होइन । यो चेतना मधेशमा अहिले आएको छ । जनताले अब माओवादी पार्टीबाट मात्रै विकास सम्भव छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । म धेरै खुशी छु । सर्लाहीमा साँढे छ हजार एकैपटक माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । रौतहटमा ४ हजार हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे । म जहाँ पुगेको छु, सबै ठाउँमा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ ।
नेपाली कांग्रेससँग गर्ने भनिएको चुनावी तालमेल भनिए अनुसार हुन सकेन । तपाई कहाँ चुक्नुभयो ?
मैले धेरै पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिलगायतका मधेशका नेतालाई लगातार भनेको हुँ । राम्रोसँग तालमेल ग¥यो भने मधेशमा धेरै राम्रो परिवर्तन आउन सक्छ भनेको थिएँ । तर अन्तिममा किन तालमेल हुन सकेन भन्दा कांग्रेसको कारणले । कांग्रेसभित्रको झगडा, यति कचिङ्गल रैछ कि कांग्रेसभित्र, त्यसकै कारण सोचेअनुसार तालमेल हुन सकेन । हामी चाहन्थ्यो कि राजमार्ग क्षेत्रमा तालमेल गर्नुपर्छ, त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ । तर केही ठाउँमा बाहेक तालमेल हुन सकेन ।
चुनावी तालमेल हुन नसक्दा केन्द्रिय गठबन्धनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
त्यस्तो केही प्रभाव पार्दैन । हामी चाहन्छौँ कि शान्ती प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुङ्यिोस् । सबै निर्वाचन समयमा नै होस् । देश आथिृक समृद्धितर्फ जाओस भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसकारण अहिलेको चुनावमा तालमेल नहुँदैमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन कहिलेसम्म कायम रहन्छ ?
शान्तीप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र देशलाई विकासको बाटोमा लैजानका लागि यो सहकार्य धेरै परसम्म लैजानु आवश्यक छ ।
थरीथरीका नतिजा : सासूसँग बुहारी पराजित
ओलीजी अब गफ होईन, काम गर्नुहोस भन्दै गगनले दिए चेतावनी (भिडियोसहित)
उम्मेदवारका गाडीले इन्धनको खपत बढायो, पेट्रोलको दैनिक खपत करिब १२ सय किलोलिटर
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण चाँडैः अर्थमन्त्री कार्की
राजपाका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन हुँदै
तीन हजार पाँच सय प्रहरी खटाइने
चितवन पुगेर माधव नेपालले भने,‘प्रचण्डलाई आफ्नै नेता सम्झेर भोट हाल्नुहोस’
प्रदेश ‘ख’ खोटाङमा माओवादी केन्द्रका पासाङ विजयी